admin, Author at MZB FAMILY - Page 701 of 701
Live လွှင့်ကပြကာ မျက်နာသုတ်ပဝါ ချွတ်ပြီး ပေါက်ဆီလေးတွေပြ လိုက်တဲ့ Clara Lee ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်
Live လွှင့်ကပြကာ မျက်နာသုတ်ပဝါ ချွတ်ပြီး ပေါက်ဆီလေးတွေပြ လိုက်တဲ့ Clara Lee ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဒီတခါမှာတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို ထူးထူးခြားခြား သတင်းတပုဒ်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒါကတေည့ Clara ကတော့ ဗီဒီယိုဖုန်းပြောနေတဲ့ ပုံစံနဲ့ ရေချိုးခန်းထဲကနေ ထွက်လာပြီး မျက်နှာသုတ်ပဝါကို သူမကိုယ်ပေါ်မှာ ပတ်ထားပြီး ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာရှေ့မှာ ကပြရင်း သူမရဲ့ ကိုယ်မှာ ပတ်ထားတဲ့ မျက်နာသုတ် အဝတ်က …
အလွန်အေးတဲ့ ဆောင်းတွင်းဘက်မှာ မိဘမဲ့ကလေး ၆၅၀ ကျော် ဒုက္ခရောက်နေပါတယ် …. ကူညီပြီးမျှ ဝေပေးပါဦး
ခုကာလက အလွန်အေးတဲ့ ဆောင်းတွင်းချိန်ခါကို ရောက်ရှိနေပါပြီ တချို့လူတွေက နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ အိပ်စက်ခွင့်ရချိန်မှာ တချို့ကတော့ ချမ်းခိုက်တုန်ပြီး အိပ်မရဖြစ်နေကြတာပါ ဟုတ်ပါတယ်။ ခြုံစောင်တွေ အလှူရှင်မရှိလို့ မိဘမဲ့ကျောင်းက အယောက် ၆၅၀ ကျော်သောကလေးတွေ ပဲခူးရိုးမကဖြတ်တိုက်လာတဲ့ ဆောင်းလေအေးအောက်မှာ အရိုးခိုက်အောင်ချမ်းနေကြရရှာပါတယ်။ “နို့စို့အရွယ်ကနေ (၁၀)တန်းထိ (၆၅၀)ကျော်သောကလေးငယ်တွေအတွက် အနွေးထည်နှင့်ခြုံစောင်များ လိုအပ်နေလို့ကျေးဇူးပြုပြီး ရှယ် ပေးကြပါဦး။ အအေးဓာတ်ကလည်းတစ်ဖြေးဖြေးနဲ့ ပိုပိုလာတာနဲ့အမျှ၊အအေးဓာတ်က ပဲခူးရိုးမ …
သင်ဇာဝင့်ကျော်ထက် ပိုလှပြီး ပိုမိုက်တဲ့ နိူင်ငံခြားသူလေး
နိူင်ငံခြားသူလေးဟာ နှင်းတွေကြားမှာ ကာယအလှကို ပြသနေပါတယ် သူဟာ ကျော်ကြားလှတဲ့ မော်ဒယ်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ် ဒီလို ပုံတွေ တင်တာဟာ ယောကျ်ားထုကြီးကို အုန်းအုန်းကြွကြွဖြစ်စေတယ်လို့ သူရဲ့ instagramမှာ ဖော်ပြထားပါတယ် သူဒီလိုတင်ဟာ ဘယ်သူမှမတင်ဖူးကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားပါတယ် ဒီလို့ တင်နိူင်တဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်းကိုလည်း us dollar 1000ပေးမယ်လို့လည်း ဖော်ပြထားပါသေးတယ်😇😇😇😇 crd moe zaw bo …
ယနေ့မြန်မာနိူင်ငံတွင် ဖြစ်နေတဲ့ သရုပ်ပြများ☹☹☹☹☹
နတ်သမီးတွေမှာဘဲရှိတာ ဝက်တွေမှာ မရှိဘူး😘😍😍😍
သူ့ရဲ့ လည်ပင်းလေးကို ရှေ့သွားလေးနဲ့ သာသာလေး ကိုက်ကြည့်ပါ …
Home သူ႕ရဲ႕ လည္ပင္းေလးကို ေရွ႕သြားေလးနဲ႕ သာသာေလး ကိုက္ၾကည့္ပါ … December 8, 201963 Facebook Twitter 142သူ႕ရဲ႕ လည္ပင္းေလးကို ေရွ႕သြားေလးနဲ႕ သာသာေလး ကိုက္ၾကည့္ပါ … သူနဲ႔ ႏွစ္ေယက္တည္း အတူရိွေနခ်ိန္မွာ ဒီလိုေလး အခ်ိန္ျဖဳန္းပါ… (1) သူ႕ရဲ႕ လည္ပင္းေလးကို ေရွ႕သြားေလးနဲ႕ သာသာေလး …
ခ်စ္သူကို အရမး္ဂရုစိုက္ျပီး ဖူးဖူးမႈတ္ခ်စ္တဲ့ ေကာင္ေလးေတြဆိုတာ ဒီလိုပါ….
December 8, 2019 December 9, 2019 - by admin - LeaveaComment
ကာင္ေလးေတြတကယ္ခ်စ္မိသြားျပီဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ခ်စ္သူကို အထိမခံပဲ ဖူးဖူးမႈတ္ခ်စ္တတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ကေလးလိုျဖစ္သြားလိုက္၊ တစ္ခါတေလ လူၾကီးလိုျဖစ္သြားလိုက္နဲ႔ အရမး္ကုိ ခ်စ္တတ္ၾကတဲ့ သူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ ခုေဖာ္ျပေပးမယ့္အရာေလးေတြကေတာ့ ခ်စ္သူကို အထိမခံပဲ ဖူးဖူးမႈတ္ခ်စ္တဲ့ ေကာင္ေလးေတြရဲက အျပဳအမူေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။ (၁) ဆံပင္ေလးကိုစည္းေပးတယ္ ခ်စ္သူကို အရမး္ဂရုစိုက္ျပီး ဖူးဖူးမႈတ္ ခ်စ္တဲ့ေကာင္ေလးေတြက ခ်စ္သူကို အျမဲတမ္း ေက်ာ့ေက်ာ့ေလးပဲ ေနေစခ်င္ျပီးအလွၾကည့္ခ်င္ေနတဲ့ သူေတြပါ။ ခ်စ္သူ ဆံပင္ေတြ …
Previous 1 … 700 701